Omenala nke Maldives | Akụkọ Njem
Njem Asia | | Maldives, Asia njem
foto akwụ ụgwọ: daniel nma
Omenala nke Maldives na-amata ụzọ dị iche iche na mmepe ya emetụtawo ọtụtụ ihe. Dị mkpa kemgbe ya mbọhọ Sri Lanka na ndịda India, ọwụwa anyanwụ nke Afrika, na agwaetiti Malay na Middle East n'ihi ntụgharị ya Islam na narị afọ nke iri na abụọ, yanakwa ebe ọ dị na Oke Osimiri Indian n'okporo ụzọ dị iche iche ụzọ gasị.
Enwekwara ihe sitere na mmalite Arab, Afrika, b Indoneshian. Omenala nke Maldives ịkọrọ ọtụtụ njirimara na Sri Lanka na Kerala, karịsịa omenala siri ike matriarchal.
foto akwụ ụgwọ: javic
La egwu nke Maldives, dị ka Bodu-Beru (n'ụzọ nkịtị "nnukwu ịgbà"), na-achọpụta african mgbọrọgwụ, ebe ọdịnala ndị ọzọ nwere myirịta na ihe ndi arabic na mpaghara ugwu nke india.
Otu akụkụ nke ọha mmadụ Maldives na-bụ ichegbu onwe nnọọ ịgba alụkwaghịm ọnụego tụnyere ụkpụrụ adị na mba Alakụba ma ọ bụ South nke Asia, nke a na-egosi ogo dị elu nke nnwere onwe na ndị inyom nke Maldives nwee banyere ndụ ha.
La ọha mmadụ nke Maldives fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị islam. Mana nnọpụ iche Maldives nke akụkọ ihe mere eme emmepe Islam ke Middle East ye Asia ẹyak ndusụk owo ẹnọ nkwenkwe na omume tupu Alakụba lanarị. Enwere nkwenye zuru oke na jinn, ma ọ bụ mmụọ mmebi iwu. Maka nchebe megide ihe ọjọọ ndị a, ndị mmadụ na-agakarị ọtụtu ma ọ bụ anwansi.
Ogo nke ndị a nkwenkwe emeela ka ụfọdụ ndị ọkà mmụta chee na e nwere usoro kpokọtara-okpukpe ihe yiri ya Islam A maara dị ka fanditha, nke na-enye ndị bi n'àgwàetiti ụzọ ka mma maka ịnagide nsogbu dị na ha ndụ. Agbanyeghị nke a bụ ọdịnala na taa ọ bụ naanị na mpaghara ime obodo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Maldives » Omenala Maldives
Ogige Madison Square: Ama egwuregwu ama ama ama n'ụwa niile dị na New York!